हाम्रो बारेमा - डेल्टा एप्लिकेसन टेक्निकहरू
हाम्रो कम्पनी डेल्टा एप्लिकेसन टेकनीकहरू आजको रूपमा, १ 1988 XNUMX मा जैक कोपन्सले स्थापना गरेको हो। त्यस कम्पनीको नाम कोरेक्स थियो। तरल पदार्थ लागू गर्न जाकले वर्षौं बिकास गर्ने मेसिनको अनुभवको लागि धन्यवाद, व्यवसाय छिट्टै धेरै कम्पनीहरूका लागि उपयुक्त पार्टनरको रूपमा बढेको उदाहरणका लागि मोटर वाहन उद्योग।
कोरेक्स कसरी अरूबाट भिन्न थियो? अनुकूलन! सबै मेशिन उत्तम समाधान प्राप्त गर्न ग्राहकको साथ धेरै नजिकको सहकार्यमा विकसित गरिएको थियो।
२०० In मा कोरेक्स डेल्टा ईन्जिनियरि withको साथ सेनामा सामेल हुन्छ। लक्ष्य: ग्राहकको लागि उत्तम सेवा, फलो-अप र निरन्तरता प्रदान गर्ने क्षमता। मेशिन र सेवाको उत्पादन डेल्टा ईन्जिनियरि theको हातमा छ, जैकलाई नयाँ टेक्नोलोजीहरूको प्रयोग गरेर नयाँ समाधानहरूको विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्न अनुमति दिँदछ।
आजकल, जैक एक युवा टोली द्वारा समर्थित छ, अनुभव र ईथ्युसिअमलाई जोडिएको छ हाम्रो ग्राहकहरूको प्रक्रियाको लागि उत्तम समाधान फेला पार्न सक्षम हुन। DAT ले ठूलो बहुराष्ट्रिय समूहहरूको गणना गर्दछ, साथै यसको ग्राहकहरूको बीचमा सानो स्वतन्त्र स्वामित्व प्राप्त कम्पनीहरू छन्।
यो हाम्रो उद्देश्य हो कि आवश्यक समाधानहरू विकास गर्न हाम्रो ग्राहकहरूलाई आफूलाई अरूबाट अलग गर्न सक्षम पार्न। हाम्रो ग्राहकहरु प्रक्रिया, कच्चा माल र श्रम हाम्रो KPI को हो जब नयाँ मेशिन र समाधानहरू डिजाइन गर्ने।
हामी कसरी हाम्रो स्थापनाहरू महसुस गर्छौं? तपाइँसँग नजिकको सहकार्यको माध्यमबाट, हाम्रो ग्राहक: तपाइँको आलोचनात्मक प्रतिक्रियाले हामीलाई हाम्रा उत्पादनहरू समायोजन गर्न र सुधार गर्न अनुमति दिन्छ। हाम्रो सफलताको लागि महत्त्वपूर्ण कारक: हाम्रो उद्यममा व्यक्तिहरू र उनीहरूको सृजनात्मक क्षमताहरू। हाम्रो लक्ष्य भनेको उच्च-गुणवत्ता, लागत-प्रभावी समाधान, निर्माण, स्थापना र बिक्री समर्थन पछि डिजाईन गर्ने कार्यमा उत्कृष्टता मार्फत ग्राहकको सन्तुष्टि प्राप्त गर्नु हो। हाम्रो संस्कृति, ड्राइभ र प्रत्येक व्यक्तिगत कर्मचारी को विशेषज्ञता को माध्यम बाट, हामी दुनिया भर मा हाम्रो ग्राहकहरु को मागहरु को लागी अद्वितीय स्थिति मा छन्।